Marka Winners Eeg Sida Khasaaray — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Marka Winners Eeg Sida Khasaaray
Maxaad ku guuleysatay eg? Ma dheer ama gaaban? Madow ama caddaan? Strong ama daciif ah? Waxaan u maleynayaa in ay ku xiran tahay waxa aan ula jeeddaan u- “guusha.”
Waxaan la nuugo galay sheekada ka mid ah ku guuleystay bishan la soo dhaafay sida a akhriyo dheer ah, laakiin Biography mashquuliya Michael Jordan ee. account faahfaahsan I xusuusiyay sababta jaceeylka dadka badan ee isaga la xuduud on geesi cibaadada. wax badan ayaa laga odhan karaa oo ku saabsan “uu airness” laakiin qofna weligiis u sheegan karto in uu ku guuleystay a ma. Ma wuxuu u eg yahay guusha ka hor inta uu helay oo dhan kuwa siddo horyaalka, in kastoo?
Sida aad kitaabka ku akhriyey, Sidaa darteed anigana waxaa cad ka caruurnimadiisii ​​in uu noqon lahaa kooxda heysata horyaalka a. Haddii in uu ahaa ciyaar aad u fiican sida ashuun horyaalka yar ama sida Roombo Iyi yar a; uu shahawada dugsiga sare ama uu ciyaarta ku guuleystay shot sano Freshman uu la UNC inta lagu guda jiro.
By markii ugu waxaan ka helay in cutub ku saabsan horyaalka uu sida Chicago Bull a, waxaa jiray wax kadis ah ma. qoraaga ayaa u sheegay in uu sheekada hab u cadeeyay: Jordan uu u dhashay inuu guusha a. Iyo in waxa inaynu naqaan isaga, waayo,: ku guuleystay lix siddo horyaalka, shan MVPs, iyo 14 All kulan oo uu saftay Star (in aan ku xuso uu doodin boqortooyada ee ciyaarta kabaha ciyaaraha fudud).
Noocan ah lala doodin boqornimadiisa waa waxa inta badan u imanayaa inuu marka hore xusuusta marka aynu u malayno “guusha.” Laakiin waxaan doonaya na in uu ka tago qolka for nooc kale oo ku guuleystay. Nooca guusha oo aan haysan oo dhan sameynayo kooxda heysata horyaalka a. Nooca guusha oo daciifnimo badan yihiin xusid mudan ahayn awooda uu. Nooca guusha kaasoo u muuqda mid khasaare ah oo mararka qaarkood.
guulaystay, laakiin isagoo guulaysanaya
Waxaan noqon doonaa daacad ah aad la. Labada sanno ee ugu danbeysay ayaa ahaa mid cajiib ah siyaabo badan, laakiin ay sidoo kale quruxsan adag. Waxaan ku riyaaqay guur xoog iyo bilowgii labada qof yar. Waxaan la kulmaan oo farxad u ah kooxda Kristaanka dhaqatada ee kaniisadda caafimaad. Laakiin waxaan sidoo kale dhibayay la daciifnimo. Waa adag tahay, waayo, kuwa dibadda ah si ay mararka qaarkood u sheeg maxaa yeelay, waxaan u muuqdaan in ay la samaynayaan waxyaabo badan oo wanaagsan. Laakiin haddii keliya aad arki karin in yar oo ku dhow.
Waxaan leeyahay chronic daal syndrome. waan ogahay, Aan marnaba maqlay waxaa ka mid ah ka hor midkood. Waxaa laga yaabaa in sababta marka ay igu dhacay waxa aan dareemey sida tasoo sucker badan xumad habaysan a. Bilowgii runtii curyaantey hele waxaan ahaa oo keliya soo jeedo muddo lix saacadood maalintii, oo daalan ee siddeed iyo toban kale. In ka badan sanadka soo socda ma heli fiican, laakiin weli iga tagay qolof ah in ay noqdaan waxa aan isticmaalo. aan toddobadii sano ee u dambeeyey waxaan ku noolaa la daal ah neverending. daacad uma aan xusuusan karo markii ugu danbeysay ee aan dareemay rested- sida aan batari ku dhinteen, laakiin marnaba buuxin.
Energy waa sida shidaalka ah in awoodaha goobta kasta oo nolosha. Waxaan u baahan tahay waayo hawl kasta, wada hadal kasta, fikir kasta. Oo markii shidaalka waa yar yahay, wax walba u xanuunsadaa. Sababtan qaar ka mid ah, jidhkayga dayn maayo ii loogu talla-. Halkii aan taangiga Cabsin midig kor ku xusan “E,” oo aan isku dayo inaan ka dhigi iyada oo loo marayo. Waxaa la iiga tegey isagoo dhaawac ah iyada oo loo marayo goobta kasta oo noloshayda.
Waxaan aad waxyaalahan oo dhan u sheeg, ma u tahay naxariis, laakiin si ay uga hortagaan sida aad u malaynayso. Qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa in ay eegaan ka waqtiyada ku seegay, maalmaha niyad-, xiisadda marmar in aan guurka, oo wuxuu ku fikiri, “Man, ninkaan waxaa hadda laga badiyay.” Waa hubaa in uu dareensan yahay sida laga badiyay markii aan leeyihiin in ay haddana mar kale bedesho qorshaha noloshayda ama wiilkayga u sheeg, “Daddy ayaa aad u daallan inay hadda u ciyaaro.” Been ayaan sheegayaa haddii waxaan ku idhi waxa aan ahaa niyad iyo isku dayaya. Weli, Weli waxaan sheegan aan guul macaan.
No, Anigu ma aan ahay nooca sarreeyaan xoogan oo ku guuleystay; Waxaan dhab quruxsan daciif ahay. Waxaan ahay nooc oo kala duwan oo ku guuleystay. Oo waxaan ka shakisan badan oo idinka mid ah aad u tahay.
Kind A kala duwan oo ku guulaystey
Waxaan leeyihiin guul, laakiin ma aha, maxaa yeelay, xooggaygu ayaa xaqiijisatay. My guul dhacdo in kasta oo ay itaaldarrooyinkayga, xataa dembiyadooda oo aan. Anigu ma aan ahay Victor kaasoo adkaaday cadaawayaashaada iyo ayaa guul ka; Waxaan run ahaantii kaliya u helay. Anigu waxaan leeyahay guul Ciise.
Paul geliya sidan oo kale in Romans:
Siday ugu qoran tahay, "Adiga daraaddaa ayaa lagu laayaa maalinta oo dhan u dheer; waxa aan ka fiirsaday sida ido la qalayo. "No, waxaas oo dhan waa in aan ka sii badan yihiin ugu guulaysannaa kii kan ina jeclaaday” (Romans 8:36-37).
Paul xigtay Sabuurka 44, halkaas oo ugu sabuur ooyaa caawimaad Ilaah ku dhex maxkamadda. Markaasaa Bawlos wuxuu isticmaalayaa aayadda in uu hal dhibic in waxba laaban karaan wixii Ilaah inagu sameeyey, waayo, in Masiix.
Mid ka mid ah waxyaalaha ugu duwanyihiin waa in ka dib markii xusay waxyaalo cabsi badan: lagu dilay, la gowracay, Paul ayaa sheegay in xataa waxyaalaha aan waa guulaysannaa. Xataa marka aan lumin, waxaan ku guuleystay. Xataa marka aan lagu guulaystay by adduun dhacay, waxaan sii guulaysannaa Ciise. The dagaalo maalin kasta yar ha ogaado masiirkeena, maxaa yeelay, dagaalku mar horeba laga guuleystay. Ma aha in aad soo celin rajada cajiib ah? Haddii aynu ku jirno ee Masiix, runtii waxaan ma ku waayi kartaa.
Waxaa laga yaabaa in, aniga oo kale, aad ee xilli ciyaareedkan ka mid ah dhib weyn. Waxaan doonayaa in aan kugu dhiiri leh siyaabo dhowr Waxaan qabaa ku saabsan runta this.
1. Ha Just Fiiri Waxaad at
Marka aan maalintii ku qaataan oo diiradda saaraya itaaldarradayda iyo gunuunac qalbigayga, Waxa kaliya ee aan ku quudin aan ku dhiiri oo Kor U aan dareen been ah oo rajo. Markii aan igu dhaygagaan, at Waxaan qabaa inaan laga badiyay, laakiin markii aan taagni Ciise waxaan xusuusiyay in aan ku guuleysto. Markii uu jabiyo cadaawayaashiisa, uu iyaga kaga adkaatay naga wakiil ah.
2. Ha Just Fiiri Hadda
Haddii aan kaliya diiradda on maanta ama intaas oo sannadood la soo dhaafay, Aan u damcin in u malaynayaa in ay tani tahay sida ay had iyo jeer waxay noqon doontaa. Laakiin Ciise wuxuu ku iibsaday wax aan la rumaysan karin ii on iskutallaabta aan aan weli expereienced. Waan ogahay Ilaah imperfectly hadda, laakiin waxaan ka heli in isaga si fiican u garan ka dib. xataa Wuxuu ii siin doonaa brand jidhka cusub iyo ilmo oo dhan iga tirtir iska.
Waxaan sidoo kale la jirrabo in ay diiradda saaraan kuwa markaa u muuqda in hadda lagu guuleystay. Kuwa aan haysan maxkamadeeynta isku mid ah iyo dhac in had iyo jeer u muuqdaan in ay noo cudurka daacuunka. Laakiin kooxda in uu ku guuleystay in quarter saddexaad ma aha had iyo jeer kooxda kuwaas oo ku guuleystay in dhamaadka. Dad badan ayaa u muuqdaan in ay la qaaday dagaalo maalin kasta, laakiin iyagu ma ay isku halleeyey kan ku guuleysto dagaalka. Ha fiirin kaliya ee hadda.
Michael Jordan ayaa weli ah mid ka mid ah guuleysatay ugu weyn oo ugu caansan ee abid na arkay. Laakiin waxaa jira guul weyn in la lahaa. Oo midkoodna kama naga mid ah ayaa waxa ay ku qaadataa inuu ku guuleysto dagaalka nafteena; Masiixa oo keliya samayn karaa in. Waxa uu adkaaday oo dhan cadaawayaasheenna inoogu: iyada oo aan, Shaydaanku, iyo dhimasho laftiisa. Dhammaan waxay qaadataa inuu ku biiro kooxda lacagta iyo ka guul uu jeestay dembigayga iyo kalsooni ku qabka in Badbaadiye ah. Qof kasta, xataa liita naga mid ah wuxuu noqon karaa mid ku guuleysatay.
Tani waa run in qalbigayga ku jiray markii aan erayadan ku qoray “Victory Sweet”:
Victor ma aha mid ka mid ah in uu ku guuleystay INNING_NUMBER toddobaad
Koob uma ay kuwa helay bilow wanaagsan u tagaan
Marka waxaan idinku leeyahay waxaan ku guuleysto waxaan ula jeedaa ha maantadan la joogo waxaan ahay
maalintaas waxaan ula jeedaa marka cirka cirro libdhi baxay, ka dibna waxaan ku guuleystay 'daraaddeed waxaan isaga wax la xukumi
Hubi inaad soo qaado nuqul ka mid ah “Kaca” marka ay timaado baxay 10.27.14!
Liam • October 23, 2014 at 12:44 pm • Reply
Safarka aan la ciyaaro guusha macaan non-joojin maalmaha lamaane ee la soo dhaafay, shaqada Ilaah ee noloshaada oo doonaya in la shaqeeya aad album. Inaannu idiin soo ducayno
Emerson Tillman II • October 23, 2014 at 1:08 pm • Reply
Ilaahay ha barakeeyo aad Bro.
Victoria Jones • October 23, 2014 at 1:17 pm • Reply
Kanu waa eraygii dhiirigalin leh oo caynkaas ah. Your song articulates xiriirka ka dhexeeya sir ah ammaanta daqiiqado, iyo dhacyada aan la koontarooli karin. Mahadsanid. Waxaan hadda garan wax kasta oo, wanaagsan iyo kuwa xun, yimaado soo degaysa xagga Aabbaha of Lights.
wax kasta • October 23, 2014 at 1:48 pm • Reply
akhrin Great! Waxaan si dhiirigelinayaa by this! Waxaan ahay umushu la gabaygii!
Steve • October 23, 2014 at 3:43 pm • Reply
Trip, this song uu ahaa barako weyn geli nolosha horeba! My aabe iyo walaashay leeyihiin arrimaha caafimaadka qaar ka mid ah in ay la macaamileysay dhowr sano oo sharaxaad aad u sababta iyo sida aad ku qoray this song waxaa u qurux badan oo qabow. Waad ku mahadsan tahay isagoo run in rumaysadkiinna iyo injiilka.
Nathan • October 23, 2014 at 5:06 pm • Reply
Anigu waxaan ahay waxay ka cabsan in aad maskax weli waa xoog badan inta lagu guda jiro itaaldarrada. A daydo oo run ah.
Lydia • October 23, 2014 at 10:41 pm • Reply
Tani waxa ay ahayd sidaa darteed yididiilo ii. My tamarta ayaa heer la mid ah sida idinkaa ee labadii sano ee la soo dhaafay… Waxaan ugu danbeyn helay cudurka faraxnay chronic bilood laba ka hor iyo daal ugu dambeyntii la qaadan fududee! Waxaan rajaynayaa in aad ugu danbeyn ka heli kartaa wax aad ka caawisaa! tahay si aad u samaynaya si aad u badan ka badan dadka ay ogaadaan. Jeesada si aad u! Waxaad tahay waxyoonay ii :)
Cheyenne • October 23, 2014 at 11:52 pm • Reply
My walaalkaa daal chronic oo aan rabay in aan ogaado haddii aan idiin xidhi kari waayeen labada kor si uu kula hadli karaa?
Denise • October 24, 2014 at 1:41 waxaan ahay • Reply
Ilaah ha idiin barakeeyo Mr. Barefield. Waxaan wada barakaysan daawashada wacdiyada aad, dhageysto aad music, reading articles iyo posts aad. Waan ku baryayaaye awood ayuu bogsiinayay: magaca xoog badan oo Ciise ka badan jirkaaga. Waan ku baryayaaye, waayo, xoog iyo dulqaadashada ku taaban, si aad u samayn kartaa Eebayaal shaqeeyaan iyada oo aan sii kordhaya daal laakiin waa inaad ku cusboonaataan maalin kasta oo sii. Waan ku baryayaaye idiin ducayso ka badan, Jennifer iyo laba yaryarkiinna aad. Waan kugu mahad naqayaa Rabbiga addeecidda Williams si aad isugu yeedhayso in uu nolosha sida wadaad ah, ninkeeda, Aabbahaa iyo artist. Ha iftiin sii iftiimi naftiisa ilaa. Waad ku mahadsan tahay Aabbaha, in magaca Ciise ee, Aamiin.
Duran Lowery • October 24, 2014 at 12:32 pm • Reply
Waxaan ahay rumaystaha dhabta ah. In bulshada maanta waa mid aad u fudud si aad u hesho kooxda dabagal ka walwalsan tahay sida ay dadka kale ee noloshooda ku nool. Ma sugi karo kici inay ka soo baxaan. Trip u ahaantii ha igu dhiiri in uu noqdo ninka ugu fiican aabbe guursadee kids ah.
Patrick • October 24, 2014 at 12:49 pm • Reply
Trip, mahad wadaago aad qalbiga wax baa laga. Xaqiiqada ah inaad ka cabanayso oo weli awoodaan in ay soo saaraan shaqo tayo oo kale waa u Waxyoon. Ilaah ayaa runtii loo isticmaali aad music in aan nolosha la hadli. Oo sidaas daraaddeed ku mahadisaan waxaa jira guys aad sida in music waxaan ahay (si gaar ah hip-hop) warshadaha kuwaas oo aan ka cabsan runta buuxda. Waxaan rajeynayaa Kac ma aha album aad ee la soo dhaafay, laakiin haddii ay tahay, sidaas shukriya in aad i baray in aad la soo dhaafay oo dhan ayaan u ahay 4 albums.
Vince • October 24, 2014 at 1:00 pm • Reply
Waxaan had iyo jeer ku dhiirri-aad posts Bro iyo this laga yaabaa in ay ka mid fiican weli! Waxaan ku tukanayeen, waayo, idinka waxaa xoog idiin ah oo aan la sugi karin in koobiyeyn album ah!
Charlana • October 24, 2014 at 1:16 pm • Reply
Waxaan si dhab ah ku raaxaysan aad song “Victory Sweet”, uuna ku celiyaan & Waxaan ku hanweynahay inaan maqalka inta kale ee CD ah. Ilaah ha idiin barakeeyo & qoyskaaga & guul aad weli sii!
Chester • October 24, 2014 at 1:26 pm • Reply
dhawaan waxaan arkay wax qabadka inta aad halkan ku jireen 9-kii October Denver. Waxaan wax fikrad ah kama saabsan maladies caafimaadka ilaa markaas. Waxaan si qoto dheer u taabtay marka aad la sameyey song “Victory Sweet.” Waxaan sidoo kale lagu dagaalamaya nno kala duwan jirka ku dhow muddo afar sano. Sidaas, aad song resonanted ila, ii keeno qarka u ilmada. Lahaanshaha akhriday aad gabal on xanuunkaaga, Waxaan helay in lagu cabanaya wax la mid ah aan ku jirey in muddo ah: Chronic Daal Syndrome. Waxa ay ahayd iyada halganka aan jirka in igu qasbay in reliquish aan kibir iyo nolosha of dherjinta iyo dib igu soo celiyey si ay u cusboonaysiinta balanqaadka ee la Masiix; ugu dambeyntii, Waxaan u mahadcelinayaa in this ayaa igu dhacay. kaliya waxaan la kulmay hal qof oo kale kuwaas oo uu leeyahay fikrad sax ah caqabadaha in this syndrome keentaa. Waxaan la Daadiyey xilkani nimcada Ilaah ee, salaadda dadka kale, iyo dadaalka ay ku madax adag oo aan xaaskiisa oo ay iga caawisaa sii ujeedooyin Ilaah sida aan sii wadato aan si ay u tagaan wasaaradda sida filasoof. Waxaan aad ugu adeegtaan Ilaaha ah oo aan ugu dambaysta la kaliya fahamsan dhibaatada dunida, laakiin guulaystay dhex. Waad ku mahadsan tahay adeeg boqortooyada Ilaah aad iyo faahfaahinta bixinta ee noloshaada.
Christian • October 24, 2014 at 1:51 pm • Reply
Trip! Idinku waad dhiirigelin ah iyada oo aad music iyo wacdiyada Bro! Jeclaada siduu Ilaah, waxaa idiin isticmaalaya! Rash Your aad ii goin Bro ! doonaa aan la tukanayay aad kuu! Oh iyo -good fiiriyaa song in aad!
Mitch • October 24, 2014 at 2:31 pm • Reply
Ilaahay ha idin barakeeyo, waayo, rumaysadkiinna aad taagyeero oo ku kalsoon tahay inuu kaa bogsiin doonaa oo idin dhan si dhab ah Shweet Victory!!! Nimco ha in Ilaah…
Mackender • October 24, 2014 at 2:43 pm • Reply
Waxaan la wayn ugu duceeyey by this article. Qalbigaygu wuxuu ku reyreeyaa sida aan akhriyey iyo dhaxal mustaqbalka in Masiixa u fiiriyaan. Ku mahadsan tahay in aad ku turaanturoon. Ma sugi karo si aad u hesho album ah. Waxaan mar walba la barakeeyey by inaad nin.
Erica D. Clanton • October 24, 2014 at 3:43 pm • Reply
Tani runtii waxay ahayd waxa i loo baahan yahay in uu akhriyo iyo Sweet Victory qalbigayga runtii taabto. Trip Thanks for wadaago waxa Eebe u siiyey sidaasi darteed waan arki kara aragti for nolosheena!! Tukanayay u for!
Ishacyaah • October 24, 2014 at 4:05 pm • Reply
aad nin music jeclaada. Waxaa iyo Christian hip hop music kale oo waa ay sii socon doontaa si ay u caawiyaan Ilaah beddelo nolosha. Our halganka ma aha weligiis sida aad si fiican u ogahay tripp. Thanks for xusuusin ah.
GabeTaviano • October 24, 2014 at 5:50 pm • Reply
Waad ku mahadsan tahay isagoo hufan, Trip. Our TOD ee dhaqaaqaan si Cambodia 3-dii January. Waxaan leeyahay dhawr su'aalood gaar ah kuu, rajeynaya in ay weydiiso ka hor inta aan ka tago. aad waxaa laga yaabaa in email ii soo gani laga yaabaa (si ay email ah in aan halkan faallo loo isticmaalo)? Raadinta weeraryahanka aan pre-kala sara kaco. shaqada run ahaantii weyn!!
ChristyCapp • October 24, 2014 at 11:05 pm • Reply
Waxaan ahay si raadinaya’ weeraryahanka album ah!! Hooba song weyn si ay u bilaabaan off la. talanti True iyo lyrics REAL in la beddelo nolosha.. ma aha nothin’ ka fiican tahay in! Habboon nuugayo oo waa xun. Waxaan u helay at 18 kulliyadda markii hore soo baxay. Laakiin aad looga gudbi karo oo aad will..with cunto ku habboon iyo excercise. Sidaas waxaa jira rajo! salaadda ugu horeysay, waraabiyo saacad kasta. Waxaan waraabiyo dhigtayna saaxiib ugu fiican ee avgiftning, gooyaa bur cad, baastada iyo raashin. Inta badan oo naga mid ah walkin’ agagaarka fuuq iyo waxa bedelay cunto dheeraad ah. Waa iyada oo tijaabooyin our inuu na ugu shaqeeyaa. Oo wakhtigaas waxaa ka mid ah isagoo buka (weli) waxaa markii Ilaah ahaa ugu awood uu shuqul qaban… rabitaanka Best adiga iyo album iyo TOD iyo kaniisadda in ay & badan sii wadida guushiisa!
Ciise • October 25, 2014 at 6:00 waxaan ahay • Reply
aragti Awesome, waxa dunida lahaa na aragtaan sida “badiyay” Nolosha adduunyo. Marka xaqiiqada oo dhan waxaanu wada nahay kuwa khasaaray dhashay, oo ay ku jiraan kuwa, in dunidu u aragto “Kooxda ku guuleysatay”..! Haddii, iyagu ma ay yimaadaan si ay u “aqoon” ama “garanaya” runta, taas oo ah “CIISE”, oo waxay ku hadhi khasaaray ..! Xataa haddii, dunida, waxay u muuqdaan in ay ku guuleysatay ..! Thanks for wadaago aad “daciifnimo”, marka in xaqiiqada jirta, aad ayaa loo sameeyey STRONGE ..!! Waxaa mahad leh Rabbiga The, inuu ogeysiin doono noo xagga tabar in aanu run ahaantii nahay STONGE sababtoo ah og Xaggiisa…!! Ka dhig adiga oo riixaya weeraryahanka saaxiibkay iyo walaalkiis xitaa haddii Rabbigu wuxuu aad siiso oo kaliya fadligiisa in ceeryaamo ka ahaa halganaka aad ..!! Tukanayay Waxaad for ..!
Ashley • October 25, 2014 at 9:16 waxaan ahay • Reply
Waxaan wax fikrad ah kama aad soo food saartay dagaalka this. Waxaan akhriyey buugga, “Nolosha wanaagsan” halka dhabarka ah, laakiin ma xasuusto arkeen in. Waxaan ahaa si barakeeyey by aad article maanta, aad tahay in aan salaadda walaalkiis. My adeer xanuunka joogtada ah daal syndrome, waana mid aad u adag, waayo, iyadii ku raaxaysan waxyaalaha waxay isticmaali. Waad ku mahadsan tahay la wadaago, qalbigayga soo baxa adiga iyo naagta maanta. Dagaalka wanaagsan. Waxaad tahay True Champion a. jacaylka Ciise oo dhan guulaysta. P.s. daroogada song aad u!
Rachel • October 25, 2014 at 10:36 waxaan ahay • Reply
Waxaan ahay si shukriya Victory Sweet. Waan dhegaystay on YouTube iyo dib ii siiyey dhimbiil. Waxaan la dhibtoonayo ku dhiiri gelin. Waxaan qabaa inaan rajo halkan isbuucyo yar laga badiyay. ma xasuusan kartaa sida kale si ay u saaray. Rajo i dareensiisay xagga Ilaah ka jar, oo ahaa qaybta ugu xumaa ee dhan. waxaa aan u qayliya;, isaga oo waydiinaya inuu i caawiyo out of this amardiiddo turjimaysa. Your lyrics Sweet Victory si toos ah ula hadlay qayb ka jabay aniga iyo retriggered rajadayda. Maqaalkani waxa uu sidoo kale ii dhiirigelinayaa. Ilaah waa sidaas wanaagsan. Waxaan la hareereeyey by dadka i jecel ka dhacay kaniisad laakiin wax fikrad ah kama sida loo kaalmo waydiisanaynaa, ama xataa sida si ay u sharxaan waxa aan u socday ilaa. Ilaah go'aansaday in aad isticmaasho, jidka oo dhan ka Texas. Mahadsanid!
Julia suuxaan • October 25, 2014 at 3:01 pm • Reply
Trip (iyo Jess)–
Thanks aad u badan for this song yididiilo. Ma sugi karo si aad u hesho album cusub. Waxaan (waaliddiintay) kaliya qaatay wiil ka Haiti. Waxa uu leeyahay cerebral palsy. Inkasta oo ay ahayd waddo adag naafada ah oo dhan, Waan ogahay in Ciise inagu siiya wax kasta. riwaayad ayaan ku arkay in Salt Lake City, todobaad ut laba ago, oo aad i siisay rajo caynkaas ah. Mahadsanid!
Iyo hambalyo aad iyo Mrs si. on mid yar cusub. ayuu haddii (ama iyada) dhasho ama ma. :) aad u jecel guys!
aad • October 26, 2014 at 8:15 waxaan ahay • Reply
Trip, Waxaan ahay oo ku saabsan sida ka fog Gun dadkii badnaa la filayaa sida mid ka mid ah ka heli kartaa…mama Canadian Caucasian shan kan van a mini! Laakiin blaring ka hadla aan had iyo jeer waa qaar ka mid ah raabka la wareeg joogto ah Trip Lee! Waan jeclahay gabaygii Sweet Victory iyo xaqiiqda this in la birthed hab cusub ka halganka caafimaadka noqnoqonayey ila. Wixii la soo dhaafay 8 sano aan la dagaallamay tabar la mid ah ka dib dhalashada dhicis ah ee gabadhayda. Waa wadada wax dulleeya inaad u socotaan oo ka mid ah weli waxaan barashada Ilaah ku kalsoon tahay in. Waad ku mahadsan tahay wadaaga aad rajo iyo bixinta tusaale ka mid ah nin unashamed Ilaah nin oo dhallinyaro ah in ay ixtiraamaan oo ay la jaanqaadaan. Barako inaad, Bro!
of • October 30, 2014 at 9:59 waxaan ahay • Reply
Soo bixi album shalay oo waan ku jeclahay! My fav waa “All kac Up”; Waxaan u leeyihiin on celiska… lol… mahad Trip ah album cajiib ah. Rajaynaynaa in maalin maalmaha ka mid aad daawato riwaayad.
Gabka • November 7, 2014 at 8:12 pm • Reply
Wow. Tani waa markii iigu horeysay soo socda guud ahaan this site iyo waxaan dhammaan posts aan ilaa iyo haatan ka akhriso inaan jecel. Waxaan sidaas barakaysan iyo encouraged.This waa uun wixii aan u baahnaa xilligan in la ogaado in inkastoo itaaldarrooyinkayga uu weli taliya ee noloshayda oo aan ka eegi kartaa isaga iyo had iyo jeer la koryeelay.
Waxaan wax fikrad ah kama doonaya inaad aad u dhex this, aad tahay baryadayda. Waad ku mahadsan tahay wax badan u la wadaago. Ilaah ha idiin barakeeyo aad u badan.
Just dhegaystay Sweet Victory oo aan si barakeeyey by aad song! Oo anna ma aan sugi karin in ay dhegeystaan ​​album oo dhan. Hubi in ay doonaa waxaan la dhagaysto oo dhan in Isbuucyada soo socda waxaan ahay. Continue hawsha wanaagsan!
Latasha • November 8, 2014 at 7:54 pm • Reply
post blog Tani waxa ay ahayd barako noocan oo kale ah ii. Inta badan, Anigu ma dareemaan fahamsan yahay by qoyska, saaxiibo, ama qaar ka mid ah qoyska kaniisad on socod this, laakiin this post iga caawiya in aragtida waxyaalaha iyo Cabashada Joojiyo ku saabsan nolosha. Waxaan ogaaday in uu jiro barako itaaldarradeenna gudahood. Ilaah run ku muujinaysaa xooggiisa / jacaylkiisii ​​inoogu, by naga caawinaya ka adkaan halganka our, marka waxaan ognahay in uu u yahay jidka kaliya ee aan sii socon doono. Thanks for the post iyo song Sweet Victory waa mid cajiib ah!
Grace iyo Peace,
TTunique • November 17, 2014 at 9:42 waxaan ahay • Reply
Gabadhayda ka go'an this song i. Anigu ma joojin kari lahaa dhegaysiga iyo qaylinaya. Waxaan la dagaalamaya arrimaha nidaamka difaaca jirka, waayo, 15 sano. ee la soo dhaafay ayaa 3 sano jiray cadaabta dhow. Laakiinse Rabbigu ahaa adag qabashada qalbigayga inta lagu guda jiro waqti in. Waxaan ugu dambeyntii u helay oo isku dhiibay isaga u. Haatan waxaan u hesho jawaabaha bidix iyo midig iyo ka soo baxay si tartiib ah. Waxaan jidka oo dhan waxba kuma soo baxo ahay, laakiin waxaan sida u daalay sidii aan ahaa ma ihi. Waxaa la yaab leh!!! song Tani……this song! ilmada……
Tim • December 4, 2014 at 1:56 waxaan ahay • Reply
Waxaan mar walba dareento dareen farxadeed markii aan aad ka maqli gabay cusub ama xitaa arki khudbad posted ama akhri aad blog. Waxaad u Waxyoon! Ma si toos ah u ogaado wixii Habboon waa sida laakiin waxaan u arkay. A saaxiibada qoyska hooyadeed ka kaniisadda waxa uu leeyahay. Waxaa jira jeer marka aan arko markaa waxaa jira jiida dheer marka aan ma samayn. Laakiin mar kasta waxaan sameeyaa iyada aragnaa had iyo jeer waa farxad. Markii aan this waxaan u maleeyey of akhri waxaan iyada u sheeg mar walba inta aan ahay waxyoonay iyada in ay ku dhex jira oo dhan oo ka mid ah, sababtoo ah waxay ammaanay Ciise. Waxay ahayd guul, sababtoo ah waxay diiday in ay hoos u malaynaysaa ku saabsan xaaladda. Waxaad laba waa xaqiiqadii ku guuleysatay! Waan ku faraxsanahay in aad awoodo inaad qalbigiinna nala wadaagto. Waxaa loola jeedaa wax badan ii.
Burton • December 4, 2014 at 8:54 pm • Reply
Aadan aqoon sida badan taas macnaheedu waa ii. Marka waxa ay u muuqataa sida ay dunida oo dhammuna waa idinla gees, aad u ogaato in aad ku guuleysan doonaa dhamaadka midabyo duulaya! Oo hadda ogayn wixii aad soo socday iyada oo toddobadii sano ee lasoo dhaafay, waxaad ogaan kartaa in aad tahay baryadayda Bro. Thanks for furitaanka ilaa qalbigaaga noo.
Femi • March 16, 2015 at 5:58 pm • Reply
Trip, aad tahay waxyi weyn. Kici waa album weyn iyo aad baan u jecelahay! Sida ku saabsan caafimaadkaaga, i rumaysan ay kaliya olol ku meel gaar ah ee afflicton aad diyaarinaya ammaanta la muujin doono. Ilaah ayaa lagu wadaa in aad isticmaasho walaalkiis more. sidaa darteed ha ka qalbi jabina. rumaysta oo ku tukanayeen. Waan ku jeclahay walaalkiis.
Nate • April 26, 2015 at 9:13 pm • Reply
Daal Chronic ayaa ka markii aan belaayo ku noloshayda 13 ama 14 sano jir ah oo dhan ilaa jidka ilaa kaliya oo wax ku toddobaad ka hor ku (waxaan ahay 28 hadda). Years of salaadda iyo cilmi-baarista ugu dambeyntii keentay qoyskeyga iyo in aan jawaabta; Cuntada ahaa sababta xididka. Soo saarida miraha oo dhan, caanaha, nightshades, sheyga iyo cuntooyin kala duwan oo noloshayda keentay in complete soo kabashada a. Weligay ma aan dareemay wanaagsan.
Anigu garan maayo haddii ay jirto noqon kartaa xal la mid ah cuntada loogu talagalay Habboon aad, laakiin waxaan rabay in aad si kastaba ogaado.
Ka dhig kor u shaqo wanaagsan. doonaa aan la idiin soo ducayno.
ThomLomas • December 7, 2015 at 4:29 pm • Reply
Waad ku mahadsan tahay erayadan la wadaago. Waxaan jeclaan lahaa in aan dhahnaa lahaa akhri sanadkan lasoo dhaafay, laakiin waxaan ahaa ma loogu tala galay si ay u akhriyaan ilaa hadda. Hadda oo aan garasho wax yar ka fiican on sababta waxaas oo dhammi dhaceen. Thanks mar kale, Ilaah ha barakeeyo.
Brandon Martinez • April 23, 2016 at 12:49 pm • Reply
Waxaan jeclahay in aad ku turaanturoon marnay aad tahay model weyn u Waxyoon doorka aan socdaan iimaanka ilaah. Hishiis barteen in ay isaga ku kalsoon tahay hishiis ogaaday in Qorniinku leeyahay marka codsatay in ay nafta iga noqdaan barakeysan siyaabo badan oo. Runtii, waxaad ii Waxyoodo, waxaana rajeynayaa in maalin maalmaha ka mid ah ilaaha i siin doonaa fursad ay ku kulmi aad adiga iyo lecrae ayaa iga caawiyay nolosha arki halkii dhimashada. Maalin kasta waxaan maqli in ay injiilka ku hip hop iyo subax, aan la Ilaah ammaanay bilaabi ii tooso ka dibna waxaan kafeega dhigi iyo bluebuds aan waxan dhegaha ii saaray oo shid hip hop injiilka iyo dhagaysan waxbarasho xataa gooynayaa erayada Ma og in qaamuuska hadallada Ma arrin sidaas u fahmaan waxaan lnow macnaha qoto dheer sababtoo ah dhaqsaha fikir qoto dheer. rabitaan One baryo iyo Quluubta anigaa iska leh inay kula hadlaan hab qaar ka mid ah maalin maalmaha ka mid xitaa haddii oo kaliya a fariimaha ay dhowr on facebook ama telefoonada laakiin noqon lahaa mid laga cabsado fadhiistaan ​​kula qof iyo wada hadlaan oo saami ugu of Christian aaminsan yahay oo ka jawaabi kasta dadka kale su'aalo iyo walaac. Aniga 26 sano jir ah baan leeyahay asalka si adag oo la soo dhaafay oo Masiix ayaa igu bedelay maalin ka maalin oo dhan oo uu ammaantiisa iyo si aan ugu gaadho karo iyo dhiirrinaya dadka kale wanaagsan weyn la maraggaygu oo muujinaya in falalka ma ahan oo keliya in erayadayda . IM Mu'min ah. Romans 1:16 Anigu waxaan ahay unashamed injiilka. Waxaan ka hadlaan everday ilaah dadka la xataa saaxiibaday kor eega aniga iyo beddeleen, sababtoo ah sida ilaah ii beddelay. Waxaan rajaynayaa in aad fariin iga arko oo akhriyey iyada oo loo marayo. Your story waa xoog badan oo Masiixa waxa qalbigaaga ku had. Fadlan haddii aad leedahay hal maalin daqiiqad igu qoraalka. Isoo wac. i qor on facebook. i Email id jecel yihiin inay kaliya leedahay mid ka mid ah wada hadal aad la. Btw sheekadaada Indhahayga keenay ilmada. Ilaah ha idiin barakeeyo,naagtaada,iyo carruurta in cimrigiinna oo dhan iyo aad samayso oo dhan.